Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Ugonyo lwe-J&J COVID-Booster ngoku Lufumana ukukhanya okuluhlaza
UJohnson noJohnson babhengeza ukuba iZiko laseMelika lokuLawula nokuThintela iZifo (CDC) IKomiti yeeNgcebiso ngeZenzo zokuGonya (i-ACIP), icebise isitofu sayo sokugonya se-COVID-19 njengesikhuthazi kubo bonke abantu abafanelekileyo abafumana ugonyo olugunyazisiweyo lwe-COVID-19.
"Ingcebiso yanamhlanje ixhasa ukusetyenziswa kwesitofu sokugonya sikaJohnson & Johnson COVID-19 njengesikhuthazo kubantu abafanelekileyo e-US nokuba bathola luphi na ugonyo," utshilo uPaul Stoffels, MD, uSekela Sihlalo weKomiti Elawulayo kunye neGosa eliyiNtloko lezeNzululwazi UJohnson kunye noJohnson. Ugonyo lukaJohnson & Johnson lubonelele ngokhuseleko lweepesenti ezingama-94 e-US ngokuchasene ne-COVID-19 xa ibinikezelwa njengesikhuthazi kulandela isitofu esinye sokugonya uJohnson & Johnson, kwaye ngenxa yendlela yentshukumo eyingqayizivele, inika ukhuseleko oluhlala ixesha elide nolomeleleyo. Siqinisekile ukuba izakunceda izigidi zabantu kwihlabathi liphela. ”
Isitofu sokugonya sikaJohnson & Johnson COVID-19 sanconyelwa njengesikhuthazi kubantu abadala abaneminyaka eli-18 nangaphezulu abafumana isitofu sokugonya esinguJohnson & Johnson ubuncinci kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo. Idosi yokunyanga yesitofu sokugonya sikaJohnson & Johnson COVID-19 sikwacetyisiwe kubantu abadala abafanelekileyo ubuncinci kwiinyanga ezintandathu emva kwethamo lesibini logonyo lweMRNA eligunyazisiweyo.
Isindululo se-ACIP sithunyelwe kuMlawuli weCDC nakwiSebe lezeMpilo laseMelika kunye neNkonzo zaBantu (HHS) ukuze iphinde ivavanywe kwaye yamkelwe.
Ugonyo lwenkampani yedosi enye ye-COVID-19 yafumana isigunyaziso sokusetyenziswa okungxamisekileyo kwe-FDA kubantu abadala abaneminyaka eli-18 nangaphezulu ngo-Februwari 27, 2021. Ngo-Okthobha 20, 2021, i-FDA yagunyazisa ukuba isetyenziswe ngokungxamisekileyo nge-booster shot ye-Johnson & Johnson COVID-19 isitofu Kubantu abadala abaneminyaka eli-18 nangaphezulu ubuncinci iinyanga ezimbini emva kogonyo oluphambili ngeyeza lokugonya ledosi elinye leNkampani.
I-Janssen COVID-19 Vaccine igunyazisiwe ukuba isetyenziswe phantsi koGunyaziso loSetyenziso oluNgxamisekileyo (i-EUA) lokugonya okusebenzayo ukukhusela iCoronavirus Disease 2019 (COVID-19) ebangelwa sisifo esibuhlungu sokuphefumla kwesifo coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ukubonelela:
• Iirejimeni yokugonya ephambili yeJanssen COVID-19 Vaccine yidosi enye (0.5 ml) enikwa abantu abaneminyaka eli-18 nangaphezulu.
• Ithamo elinye le-Janssen COVID-19 le-booster dose (0.5 ml) linokuqhutywa ubuncinci kwiinyanga ezi-2 emva kogonyo lokuqala kubantu abaneminyaka eli-18 ubudala nangaphezulu.
• Idosi enye yokukhuthaza iJanssen COVID-19 Vaccine (0.5 ml) inokusetyenziswa njengethamo lokunyusa heterologous emva kokugqitywa kogonyo lokuqala nolunye ugonyo olugunyazisiweyo nolwamkelweyo lwe-COVID-19. Inani labantu abafanelekileyo kunye nexesha lokulinganisa kwi-heterologous booster dose ziyafana nezo zigunyazisiweyo zedosi yokunyanga yesitofu esisetyenziselwa ugonyo lokuqala.
YINTONI EKUFUNEKA UXELE NGAYO KUMBONELELI WAKHO WOKUGCINA NGAPHAMBI KOKUFUMANA I-VANCEN-19 VACCINE?
Xelela umboneleli wogonyo ngayo yonke imeko yakho yonyango, kubandakanya ukuba:
• ukuba nezidlo nezinto ezithile
• ukuba nefiva
• unengxaki yokopha okanye usegazini
• awunasifo okanye uneyeza elichaphazela amajoni akho omzimba
• ukhulelwe okanye ucwangcise ukukhulelwa
• bafumene olunye ugonyo lwe-COVID-19
• ukhe waf ’isiqa ngokunxulumana nenaliti
NGUBANI ONGAFUNI UKUFUMANA I-JANSSEN VOVIDE-19?
• waba negalelo elibukhali kakhulu emva kwethamo langaphambili lesitofu sokugonya
• waba negalelo elibukhali nakweyiphi na incindi yeliyeza.
INGANIKELWA NJANI IVANGCI-19 YETYHWANA?
Ugonyo lokuqala: IJanssen COVID-19 Vaccine ilawulwa njengethamo elinye.
• Idosi enye yokukhuthaza iJanssen COVID-19 Vaccine inokulawulwa ubuncinci iinyanga ezimbini emva kogonyo lokuqala ngeJanssen COVID-19 Vaccine.
• Idosi enye yokukhuthaza iJanssen COVID-19 Vaccine inokuhanjiswa kubantu abafanelekileyo abagqibe ugonyo lokuqala ngogonyo olwagunyazisiweyo okanye olwamkelweyo lweCOVID-19. Nceda ujonge umboneleli wakho wezempilo malunga nokufaneleka kunye nexesha ledosi yokunyusa.
ZIYIPHI IINGOZI ZE-JANSSEN COVID-19 VACCINE?
• Ukuphendula kwendawo yenaliti: iintlungu, ukuba bomvu kwesikhumba nokudumba.
• Iziphumo ebezingalindelekanga ngokubanzi: intloko ebuhlungu, uziva udiniwe kakhulu, iintlungu zemisipha, isicaphucaphu, umkhuhlane.
• Ii-lymph nodes ezidumbileyo.
• Amahlwili egazi.
• Ukuziva okungaqhelekanga kulusu (njengokurhawuzelela okanye ukurhubuluza) (paresthesia), ukuncipha kwemvakalelo okanye ubuntununtunu, ingakumbi kulusu (hypoesthesia).
• Ukukhala okungapheliyo ezindlebeni (iinnitus).
• Urhudo, ukugabha.
Iziphumo eziMandundu zeAllergic
• Ubunzima bokuphefumla
• Ukudumba kobuso bakho nomqala
• Ukubetha kwentliziyo okukhawulezayo
• Irhashalala elibi emzimbeni wakho wonke
• Ukuba nesiyezi nokuba buthathaka
• Ukuqhawukelwa ngumphefumlo,
• Iintlungu zesifuba,
• Ukudumba kwemilenze,
• iintlungu eziqhubekayo esiswini,
• Intloko ebuhlungu okanye engapheliyo okanye ukungaboni kakuhle,
• Ukutyumza ngokulula okanye iindawo ezincinci zegazi phantsi kolusu ngaphaya kwendawo yenaliti.
• Ukuba buthathaka okanye ukurhawuzelela, ingakumbi emilenzeni nasezingalweni, oku kuya kusiba mandundu kwaye kunwenwele nakwezinye iindawo zomzimba.
• Kunzima ukuhamba.
• ubunzima bokuhamba ebusweni, kubandakanya ukuthetha, ukuhlafuna, okanye ukuginya.
• Ukubona kabini okanye ukungakwazi ukuhamba ngamehlo.
• Ubunzima ngokulawula isinyi okanye ukusebenza kwamathumbu.
NDIFANELE NDENZE NTONI NGOKUQHELEKILEYO?
Ukuba ufumana uhlaselo olunzima, biza u-9-1-1, okanye uye kwisibhedlele esikufutshane.
Tsalela umnxeba ngogonyo okanye umboneleli wakho ukuba kukho naziphi na iziphumo ebezingalindelekanga ezikukhathazayo okanye ezingayi kude.
Xela iziphumo zokugonya kwi-FDA / CDC yeNkqubo yokuNika ingxelo ngeNdawo yokuGonya (VAERS). Inombolo yasimahla ye-VAERS yi-1-800-822-7967 okanye unike ingxelo kwi-intanethi kubava.hhs.gov. Nceda ufake "iJanssen COVID-19 Vaccine EUA" kumgca wokuqala webhokisi # 18 yefom yengxelo. Ukongeza, unokuxela iziphumo ebezingalindelekanga kwiJanssen Biotech Inc. kwi-1-800-565-4008.
NGABE NDINGAYIFUMANA I-JANSSEN COVID-19 VACCINE NGEXESHA ELIMANYE NJENGAMANYE AMAVAVANYO?
Idatha ayikangeniswa kwi-FDA kulawulo lwe-Janssen COVID-19 Vaccine ngaxeshanye nezinye izitofu zokugonya. Ukuba ucinga ukufumana iJanssen COVID-19 Vaccine kunye nezinye izitofu, xoxa ngezinto onokukhetha kuzo nomboneleli wakho wezempilo.